ndụ na agbasa ozi n'ikuku na ihe ngosi saịtị, OK ụlọ ndò ebube show!
site ha na 20-09-30
September 24, 27th Tissue Paper International Technology Exhibition bụ nke ọma mepere! Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ 868 so na ihe ngosi a Ebe ngosi ahụ ruru mita 80,000! OK Booth [7S39] jupụtara na ịtụnanya Ihe nkiri ahụ dọtara pa ...
Akwụkwọ Akwụkwọ International Technology Exhibition Invitation
A ga-eme akwụkwọ ngosi 27th Tissue International Technology Exhibition na Nanjing International Expo Center site na 24 ruo 26 nke Septemba Anyị ji obi anyị niile na-akpọ gị ka ị bịa ma lelee anya iso gị rụọ ọrụ aka. Gaa na teknụzụ akwụkwọ ụlọ. OK nke ụlọ ndò ...
Wuhan, Daalụ! 2020, OK na-ezute gị na Nanjing!
Daybọchị atọ nke 26 Tissue Paper International Technology Exhibition bịara na njedebe na Wuhan International Expo Center taa. Usoro atọ nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị gosipụtara na ngosi a gosipụtara nke ọma dọtara uche nke ọtụtụ ndị ahịa si ụlọ na esenidụt. Onye ọ bụla witne ...
OK Technology National Manufacturer Shines na Tissue World Milan, .tali
Site na Machị 25 rue 27th, 2019, Tissue World Milan, ihe ngosi nke ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ kwa afọ na Milan, ,tali, ka emepụtara nke ọma. Ndị ọrụ ihe ngosi OK Technology bịarutere na Milan ụbọchị ole na ole tupu oge eruo ma kwadebere ya n'ụzọ zuru ezu iji gosipụta teknụzụ tozuru etozu na teknụzụ ọhụụ nke anụ ahụ China mere ...
Fụọnụ nzukọ nzukọ ntiwapụ ọrịa! OK na-emepụta ụdị 200 nke ihe eji emepụta nkpuchi kwa ọnwa!
Ebe ọ bụ na Ọkammụta Zhong Nanshan kwupụtara ọkwa mmadụ na mmadụ nke coronavirus ọhụrụ Wuhan na CCTV na Jenụwarị 20, 2020, ọrịa Wuhan emetụtala obi mmadụ ijeri mmadụ 1.4 nke China. Mgbe ị na-a attentiona ntị na ntiwapụ nke ọrịa ahụ, onye ọ bụla amalitela itinye uche na ahụike ...